सुरक्षाकर्मीमा बढ्दो छ कोरोना संक्रमणको जोखिम, हालसम्म ६ सय ९४ जना संक्रमित
२९ साउन, काठमाण्डौं । फ्रन्ट लाइनमा बसेर कामगर्ने सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायतमा कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम बढ्दै गएको छ ।
बुधबारसम्म नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीतर्फका गरी ६ सय ९४ सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएको छ ।
सर्वसाधारणको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीमा कोरोनाको संक्रमण गति बढ्दै गएपछि सबै सुरक्षा निकायले उच्च सतर्कता अपनाएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न थालेका छन् । सबै सुरक्षा निकायले आफ्ना निकायका सुरक्षकर्मीका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको सबै किसिमका बिदासम्म बन्द गरेका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले तालिम केन्द्रले दिने गरेको डे, नाइट तथा घण्टे आउटजस्ता बिदासमेत कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी प्रधान कार्यालयले प्रदेश, संघीय प्रहरी इकाइ, जिल्ला लगायत प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीलाई अति आवश्यक बाहेकका अवस्थामा ब्यारेक छाडेर ननिस्कन र बिदा नबस्न समेत भनेको बिहिबारको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायतका अनुसार बुधबारसम्म प्रहरीतर्फ २ सय ८५ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । जसमध्ये १ सय ६५ जना निको भएर आफ्नो काममा फर्किसकेका छन् । संक्रमण देखिएका १ सय २० जना प्रहरीको काठमाडौं र उपत्यका बाहिरका कोभिड अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
सशस्त्र प्रहरीतर्फ बुधबारसम्म १ सय ८५ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । संक्रमितमध्ये १ सय १९ जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने ६७ जनाको हाल विभिन्न कोभिड अस्पतालमा उपचार भइरहेको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डीआइजी राजु अर्यालले जानकारी दिए ।
सुरुमा सीमासुरक्षा तथा क्वारेन्टाइन सुरक्षामा खटिएकामा संक्रमण देखिएको थियो भने अहिले ब्यारेकभित्र संक्रमण पसिसकेको छ ।
त्यस्तैगरी नेपाली सेनातर्फ २ सय २४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । तीमध्ये ७८ जना निको भइसकेका छन् भने १ सय ४६ जना संक्रमितको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । सेनातर्फ मंगलबार दाङमा एकैपटक २९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
संक्रमण गति बढ्दै गएपछि बाहिरी सबै कार्यक्रम रद्द गरिएको छ । शोक परेका बाहेक सेनातर्फ उपलब्ध गराइदै आएको सबै किसिमका बिदासमेत बन्द गरिएको छ ।
३ भदौ, काठमाडौं । काभ्रेमा एकै परिवारका १० जनामा कोरोना…
लिदी पहिरो पीडितको पीडा, भन्छन्–त्रिपाल र शव छोप्ने कपडासमेत छैन
१ भदौ, सिन्धुपाल्चोक । भीषण पहिरोले गाउँ नै पुरिएपछि सभामुख…
कोरोना जोखिममा खटेको भन्दै जनप्रतिनिधिले लिए १२ लाख भत्ता !
कोरोना संक्रमणबाट निको भएर घर फर्किएका युवालाई छिमेकीको यस्तो दुर्वव्यवहार !
सुरक्षाको माग गर्दै नारायणी अस्पतालका ३५० स्वास्थ्यकर्मीले दिए राजीनामा